Seeder Factory၊ ပေးသွင်းသူများ - China Seeder ထုတ်လုပ်သူများ
2BXJ စီးရီး ဂျုံမျိုးစေ့သည် ပြင်ပ groove wheel အမျိုးအစား မျိုးစေ့နှင့် ဓာတ်မြေသြဇာ ထုတ်လွှတ်သည့် ယန္တရား နှင့် ချိန်ညှိခြင်း၊ မြောင်းချခြင်း၊ ကြဲချခြင်း၊ မြေသြဇာ ပေးခြင်း ၊ မြေဆီလွှာ ဖုံးအုပ်ခြင်းနှင့် နှိမ်နှင်းခြင်း ကဲ့သို့သော မျိုးစေ့ကြဲခြင်း လုပ်ငန်းအားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းတွင် ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော သုံးမှတ်တွဲ ကိရိယာကို လက်ခံပါသည်။
1. စက်သည် တိကျသောမျိုးစေ့ကြဲသည့်ပမာဏ၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မျိုးစေ့ချွေတာမှုနှင့်အတူ ပြင်ပအပေါက်ဘီးအမျိုးအစားမျိုးစေ့နှင့် မြေသြဇာအစီအစဉ်ကို လက်ခံပါသည်။
2. စက်သည် မျိုးစေ့ကြဲခြင်းလုပ်ငန်း၏ အချိန်ကိုက်ပုံသဏ္ဍာန် ပုံပျက်မသွားကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် စက်သည် အရည်အသွေးမြင့် စတုရန်းပြွန်ကို အသုံးပြုသည်။ဂီယာယန္တရားသည် ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဂီယာရိုးတံနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
3. ကျယ်ပြန့်သော မြောင်းဖောက်တံကို အသုံးပြုပါ၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြင့်စေပါသည်။
4၊ မျိုးစေ့ပမာဏ ချိန်ညှိမှုသည် လက်ဘီးနှင့် ဂီယာပုံးဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံသည်၊ ချိန်ညှိမှုသည် ပိုမိုတိကျပြီး အဆင်ပြေသည်။
5. ဓာတ်မြေသြဇာပုံး၏ဘေးဘက်သည် စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်မျက်နှာပြင်ကို လက်ခံရရှိပြီး အောက်ခြေမျက်နှာပြင်သည် V ပုံသဏ္ဍာန်မျက်နှာပြင်ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။အစေ့ထုတ်ပြွန်ကို အစေ့ထည့်ရန် ဘေးဘက်တွင် ထားထားသောကြောင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။